Ezi nzube dabere na cadastre - omume, mmekorita, usoro, ma obu ihe nzuzu? - Geofumadas
August, 2017 cadastre, Apụta, My egeomates, topografia
N'ebe ahụ site na 2009 m kọwakwara usoro nhazi nke evolushọn nke Cadastre nke obodo, nke n'echiche ya na-atụ aro ka enwee ọganihu n'etiti ihe mere onye cadastre ji bie maka ụtụ isi na oge ochie, na otu mkpa dị mkpa iji jikọta data, ndị na-eme ihe nkiri na teknụzụ na-ewebata mwepụ.
Maka 2014 Cadastre 2034 ekwuola na ngbanwe nke ọhụụ nke okwu "Cadastre", nke inwe mkpuchi zuru oke nke obodo, mpaghara ma ọ bụ obodo, dị mkpa karịa ịnwe nkenke, na-eche na a ga-eji nwayọọ nwayọọ nụchaa data ahụ. Ihe dika my ụzọ nke afọ ndị ahụ, na ihe anyị kpọrọ "njikwa njikwa okwu" na - eji "geomatic management".
Kwenye maka nzube: Ụdị?
The ọzọ eserese-e si ikpeazụ m N'ezie nke Land Management na CIAF of Colombia, na-egosi na otú ga-eme n'ọdịnihu Cadastre 2034 welitere òkè nke ọrụ na-emelite data na n'ezie na oge na incorporating ọmụma na nkenke gbanwee maka nzube ahụ
Ọ bụ na Colombia ga-abụ pilot nke mmega ahụ belatara nke anyị nwere ike ịnwale ihe a na-akpọ «Fit for Purpuse» Cadastre, na-enwe mmechuihu nke ihe emere na Africa nakwa na ọ dị ka ihe arụ na onodu ebe usoro, nkenke na Usoro esiwo dị mkpa karịa onye ọrụ ya onwe ya.
Anyị ga-ahụta mmechuihu nke ime “ihe ezighi ezi cadastre” n’ebe enwere akara ugo mmụta; Ihe ga-atọ gị ụtọ.
En E bipụtara GIM International isiokwu dị oke egwu banyere "Context-fixed" Cadastre. Dika isi di nfe dika enwere ike, nnwale nke emere na Kenya gbakwunyere ihe ndi n’abatabeghị n’otu otu ọnọdụ: Ndi isi ochichi, teknụzụ na Obodo.
Ezie na ọ bụ eziokwu, na okwu nke ya ndị a mbụ ikpe kemgbe a 'na-amụta ahụmahụ' nke ga-abụ 'ike ịgwụcha agwụcha ule igosipụta scalability nke a mere', o yiri ka a nzọụkwụ mbụ ga- na ụzọ nke 'esi' nwere ike ịrụ ọrụ yiri nke a ma rụọ ọrụ nke ọma. Nlereanya nke a ga-emegharị ugboro ugboro, na-eme ka mgbanwe ahụ doo anya na nke ọ bụla.
Ozugbo ahụ, ị ​​na-echeta n'uche Latin American na nsogbu ya. N'ebe enwere obodo ndi Aborigine ndi na agha maka imata ala ndi nna ha, obodo ndi ozo nke na-abuso obodo ndi ozo (ihe a na-akpo 'informality') ma obu esemokwu banyere ihe onwunwe n'etiti ndi ozo na na, n'agbanyeghi usoro ogugu ndi mmadu, o yiri ka ọ na-egosi na ọganihu na-ewere nwayọọ nwayọọ ma na isi ike nke nkenke ahụ na-ekwusi ike ịmepụta obodo ndị mepere emepe.
Dị ka enyi m Peruvian, Nan, kwuruN'ọzụ, anyị niile na-akọ otu akụkọ ahụ ugboro ugboro'. Ọ bụghị n'ihi na anyị bụ ọgụgụ isi, mana n'ihi na ihe ndị a na-erubere isi ọgụgụ isi kachasị mfe. Ọ bụ ihe ijuanya na otu n'ime ndị dere edemede ahụ bụ Ndị Kraịst Lemmen, nke nke afọ 2009 M dere isiokwu ahụ «data na cadastre", N'izo aka n'ihe bara uru maka anyị na Honduras kemgbe 2003 na ihe akpọrọ" Core Cadastre Domain Model ", mara ihe anyị maara ugbu a dịka" Model Domain Domain Model ". Agbanyeghị na ụdị ahụ akpọrọ Lemmen's CCDM gbanwere mgbe ọ bịara dị ka ISO 19152, ịdị mfe agbanweghị, ebe ọ na-ekwu maka isi mmadụ atọ nke ụdị ahụ.
The LADM ọkọlọtọ enye bonanzas na ghara e rigbuo n'ihi nzube a, Otú ọ dị, ha na-e-akpọlite ​​mbipụta dị ka eziokwu ahụ bụ na a ibé hụrụ ka a nlereanya (bụghị a map) nwere ike a ga-akpọlite ​​site na-abụghị kpọmkwem ụzọ na nụchara karịrị oge site akara àgwà akọwapụta àgwà, ziri ezi na mkpa.
Kwenye maka nzube: Synergy?
Tupu ị gaa n'ihu ichikota ahụmahụ na Kenya, m ga-achọ ịdọrọ uche gaa na nkebi ahịrịokwu nke ndị dere:
"A nwalere ụzọ dị mma iji nweta nlekọta ala na Kenya, na-elekwasị anya n'inye utu aha ala na nsonye maka mmadụ nile n'ime ọnụ ahịa, ngwa ngwa na 'ezigbo' ịgakwuru." Ebumnuche na enwere ike ịde nchịkọta dị ka: 'Inye utu aha, gụnyere ndị niile na-eme ihe n'usoro iji nweta ihe a pụrụ ịtụkwasị obi na ọnụ ọnụ.' Otu ha si enweta ya na-aghọ ihe kpatara mkpali anyị ugbu a.
The saịtị họọrọ ka e County nke Makueni na Kenya, ule e rụrụ site na Institution of Surveyors nke Kenya, na National Ministry of Lands, Housing na Urban Development na njikọ na Ministry of Lands, Mines na Physical Planning County nke Makueni, na - agwakọta mmekorita nke mmekorita nke ngwanro na ngwaike eji maka nzube a.
Dị ka a mbụ dị mkpa anyị mata uche nke ụlọ ọrụ gọọmenti n'ebe mbon nke ọkachamara (Kenya Surveyors oru na ngwá ọrụ nke Kadaster International) nke bụ bụghị naanị protocol ụdị ma e ji mara kama site a njikere chọrọ ịmụta banyere mkpa, mkpa na pụtara nke oru ngo nke e gosipụtara (na okwu nke ndị dere) na "kpụ ọkụ n'ọnụ mkparịta ụka na obibia: òkè, àgwà, na-eri, irè oge, mkpa monumentar vertices, ziri ezi vesos mkpuchi , wdg "Ọbụna tinye mmasị National Minister nke Lands na na-elu-ule omume site na Minister nke Lands.
Ihe nke abuo abuo. Ihe ndi obodo dum na-ekere na mmepe nke oru. Ihe ndị egbula ikwenye: "The òkè nke obodo bụ ntọala maka ihe ịga nke ọma." Ha tinye na, dị ka ndị cadastral nnyocha e mere na-achọ enyemaka nke ndị agbata obi, ndị òtù ezinụlọ, wdg, ndị agadi na ndị tupu na ndị obodo iji "hụ na ịmara na itinye aka na nnọkọ niile"; nke na ọ na-egosi na informational ọrụ mezuo ebumnobi nke a na-ghọtara dị ka "Onye ọ bụla nwere ike nyochaa usoro n'ubi." Ma e wezụga, anakọtara data e sitekwara na GIS gburugburu ebe obibi dabeere na ígwé ojii, onye ọ bụla nwere ike na-eso usoro , na-emepụta ụdị 'òkè dị n'ime obodo'.
Ọ dị mkpa inweta nkọwapụta nke mmekọrịta dị n'etiti ndị mmadụ na ala nke ndị nwe obodo na ndị na-anọghị n'ozi, gụnyere ma ala na ọrụ. Ekwesịrị igosipụta nkwupụta na esemokwu, ebe ọ bụ ihe dị mkpa maka ndị ọchịchị iji nweta nkọwapụta nke oghere mbara ala ma ọ bụ ókè ndị a na-agbagha. "Maapụ esemokwu a" bụ mmalite iji kwado usoro mkpebi esemokwu. Na-eburu n'uche ọgbọ nke usoro ịbịaru ala nke obodo topographic nwere ike ịkwado.
N'ihe gbasara esemokwu mba, ndị ahụ metụtara 'ekwenye' ma na ebe a na-ese okwu na ọnọdụ ya. Dị ka n'oge usoro nke oke nke dị n'ọhịa, a na-emepụta ihe dị n'etiti polygons ndị e mepụtara, ha 'na-ede' ka ndị ọchịchị nwere ike ịmata kpọmkwem ebe na ụdị agha dị.
Nyocha ndị mmadụ na ndị ọzọ na-emekarị (a na-emekarị na Ụlọ Nzukọ Obodo), na-emekarị site na nzukọ obodo na mpaghara ndị ọzọ tụkwasịrị obi. N'ebe ahụ, ndị òtù obodo ahụ na-ezukọ iji hụ ihe niile data anakọtara na map, tụlee ma mee ka ha rụzie ihe. N'oge ule n 'ule, ndi obodo gosiputara data ahu.
Kwenye maka nzube: Usoro?
Nkà na ụzụ eji
Ebumnuche imewe dabeere na ngwa ESRI maka nchịkọta nchịkọta data. A na-eji nke a mee ihe na nkwekọrịta nkenke Grim device Trimble, nke ji njikọ Bluetooth. Ndị a bụ nnọọ adaba site n'ugwu ugwu n'ihi ntakịrị arọ ha. The handheld GPS ngwaọrụ-achọ a mgbazi mgbaàmà maka ikuku distortions nke GPS n'ókè na submeter ziri ezi ghọrọ zuru ezu, na-na nke a bụ adịghị mkpa elu-nkenke ngwaọrụ.
Approachzọ ndozi maka ebumnuche ahụ tụrụ aro ka eji “ókè a na-ahụ anya” iji mata ọdịmma ikike ala. Dị ka n'ime ime obodo Kenya e nwere ọtụtụ ala nke anya na-ahụ anya, ndị bi na mpaghara ahụ mere ka a hụ ụfọdụ ókè ndị ọzọ site na iji sisili osisi. N'ụzọ dị otu a, amachara ókè niile dị n'ọhịa na n'ihe onyonyo satịlaịtị. Mgbe emechara mata ya n'ọhịa, a na-eji pensụl see ihe ma ọ bụ jiri “eserese dijitalụ” na-eji ngwaọrụ GPS ntuziaka.
Mgbe nchịkọta data data, ha ga-enyocha maka iguzosi ike n'ezi ihe ma kwadebere maka nchọpụta n'ihu ọha. A chọrọ mbipụta iji gosipụta data gbasara data, nke na-ezo aka na nchịkọta nke ọtụtụ ebe nke ókèala dabere na onyinye nke onye agbata obi n'akụkụ nke ọ bụla.
Usoro na ubi
Ọrụ ubi bụ ịmepụta nyochaa mmekọrịta nile n'etiti ndị mmadụ na ala ndị dị ugbu a, gụnyere nchịkwa iwu na ikike nke ala ahụ yana nkwupụta dị ugbu a. A gwara ndị obodo na ndị ọrụ ugbo ka ha na-eje ije na-ebute atụmatụ nke ha na-atụgharị ma na-egosipụta oghere nke ókèala ha site na iji eriri GPS. Onye nyocha edere ihe ngosi ahụ site na iji ngwa ahụ. E gosipụtara ihe oyiyi satellite nke mpaghara ahụ na ihuenyo nke ngwaọrụ mkpanaka GPS. Data collection e rụrụ na ihe integrated n'ụzọ: na perimeta echekwara ka a mechiri emechi polygon gụnyere ụdị nri na-ekwu ihe a foto nwe ma ọ bụ ocho oru site na nakwa dị ka a foto identification card nwe ma ọ bụ klemanti e kwukwara. A na-eji ihe nchọta mmalite ka igodo njikọ. Ziri ezi e dabeere na jiometrị, kama lekwasịrị anya na-ejikọ gbasara ohere na nhazi data dika na-ejikọ ndị mmadụ na polygons. Ebe ọ bụ na achọrọ ụmụ amaala iji gosi na ha bụ onye ọ bụ, gọọmentị ga-anọchite anya ya. Nke a dị ezigbo mkpa maka ihe ịga nke ọma nke usoro a.
Kwadoro maka ebumnuche: Ịkewapụ?
Nlere ule e mere na Makueni County gosipụtara na nchịkọta data nchịkọta na nchịkọta data nwere ike ịrụ na ngwekọrịta, njedebe, ngwa ngwa, ọnụ ahịa na ịdabere na ya. Mmadụ abụọ na-enyocha data gbasara 40 na-etinye aka na awa isii na ugwu ugwu ma nabatara ihe ndị ahụ. Otú ọ dị, nhazi usoro iwu na nke ụlọ ọrụ chọrọ nlebara anya iji mee ihe ahụ, ọtụtụ n'ime ndị nabatara kwenyere na ọ ga-achọkwu anya ka onye ọ bụla wee nweta akwụkwọ aha ha.
N'inweta nchịkọta nke atụmatụ ndị a, a chọrọ ụdị njikọ a pụrụ ịdabere na ya maka ụdị nke ikike na onye nwe ya. Ya mere, a na-ewere ya na ọ ga-ekwe omume itinye mgbama na-etinye nyocha ọhụụ nke ọma mgbe e mesịrị, n'oge mmezi, nke otu ndị ahụ nwere ike ime.
A na-eme atụmatụ na n'oge a, ihe dịka 20% nke nchịkọta ala na Kenya ka enyochala (n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ) ma deba aha ha n'akwụkwọ. Ọnụahịa ugbu a iji nyefee, demarcate, nyochaa, ekenye na debanye aha nkwekọrịta abụọ-hectare na Kenya bụ ihe dị ka narị dollar ole kwa nhazi. N'ihe gbasara ọnụahịa zuru ezu, o doro anya na ọ dịghị nnweta e nyere na a ka na-eche atụmatụ ahụ ka a ga-etinye ya na ndekọ ahụ na 15.000.000 nkezi.
Ajuju otutu ajuju ka ekwesiri ikwurita ma guzosie ike na ozo. Otu n'ime ha bụ otu esi echekwa ma jikwaa data jikọtara ọnụ. Jiri subnet nke cadastral ma ọ bụ ndekọ data? N'otu aka ahụ, ajụjụ ọzọ metụtara mmezi nke data, ọ bụrụ na a ga-echekwa ya n'ozuzu ya ma ọ bụ na e kwesịrị ịmepụta ozi ya? Nhọrọ ọzọ nwere ike ịbụ ịhapụ akwụkwọ e biri ebi nke foto satịlaịtị ka ndị obodo ahụ chekwaa.
Obi abụọ adịghị ya na o doro anya na a ga-akwalite omume a iji mee ka mmụba ikike nke ndị edigharịrị mee ngwangwa. Synergy, nke a na-apụghị ịgbagha agbagha; na nchikota ya na teknụzụ na ọdịdị nke obodo na-enye. Omume ga-emepe n'ezie usoro ga-eme ndị na-ekweghị ekwe ọdịnala ihe ihere, na-eji ngwa FLOSSOLA dị ka ngwa na ekwentị mkpanaaka dịka nkenke na mgbazi dị iche na-aghọ nke onye kwuo uche ya. Naanị oge, ịnakwere ụkpụrụ na ịdị umeala n'obi n'agbanyeghị ịsụ ngọngọ nwere ike igosi na ọ bụghị ihe nzuzu.
M na-atụ aro ka ị mara ihe na-eme na Colombia, ya na ndị ọkwọ ụgbọ elu Multipurpose Cadastre. Ebe njikọta nke LADM, nke dabara maka ebumnuche, INTERLIS na imeghe uche nwere ike ịbụ ihe dị iche iche nke geofumada na ụtọ nke ndị Europe amaghị, ebe mkpa ha gbasara ijide ala dị iche na nke ọnọdụ anyị na mba ụzọ mmepe, ma ọ bụ dị ka ọchịagha si kwuo ya: n'okpuru njikwa.
Previous Post«Previous Python: asụsụ na kwesịrị Hazie geomatics
Next Post LandViewer: image analysis Earth chọpụtara na ozugbo si nchọgharị gịNext »